imoto encane elisemhlanganweni futhi icwecwe "Oka", noma Vaz 1111 lokuqala yabonakala Avtovaz ifektri kanye iVolga ngo-1989 futhi kwakufanele kube i ezingabizi, ethandwa futhi ukonga nemoto. Onjiniyela "Oka" benze i-imodeli esisebenzayo isabelomali abantu izindlela ngokulinganisela. imoto Compact ekhiqizwa ezinguqulweni ezihlukahlukene - social abantu abakhubazekile ilitha engine, ezemidlalo ezinezinjini futhi wasisekela ukumiswa kanye value elincane imoto lifinyelele imishini ethobekile endlwaneni eyakhiwe. Ekuqaleni, "Oka" kwakhululwa nge ayinzima injini 30 Besebenzisa amahhashi, okuthuthukile elihambayo owehla imodeli 33 hp futhi 53 hp "Oka", izimfanelo okuyinto ziyasebenziseka: ukumiswa ezimele, wokubacindezela, phambi disc amabhuleki, ama-drum misa, phambi ukumiswa kanye bamba - intambo, ekahle yokuphila idolobha kanye nohambo waya ezweni. Imoto Ubukhulu uvumele ukupaka ngisho ezindaweni ungakhululekile kakhulu futhi ezincane sezimoto yedolobha elawula imishini - obuphelele "Oka" - 3.2 m, ububanzi - 1.42 m, ukuphakama - 1.4 m, a isisindo 645 kg. Engine "Oka", izimfanelo okuyinto musa ihluke esinamandla kakhulu, elula futhi kufinyeleleke silondoloze. Imoto wakhishwa ukukhiqizwa ngo-2008.
Izici "Oka" imoto
"Oka" iyona phambili isondo ezine enezihlalo hatchback ngezicabha ezintathu futhi ezine-gearbox. injini yayo etholakala transversely, yena ezimbili cylinder, ephethe umthamo ukusebenza elilingana 750 cc isisindo Okugcwele avumelekile imoto 975 kg. wheelbase Olinganiselayo 218 cm kanye phambi ithrekhi 121 cm ihlawulelwa ezinhle phansi imvume ka-15 cm. bahlakazeka "Oka" kuya ku-100 km / h imizuzwana engu-30 futhi ijubane layo uma igijima esiphezulu 130 km / h. Emotweni ngempela ihlanganise kalula abadala abane, build Ngokwesilinganiso, kanye egumbini imithwalo zingandiswa ngu alo izihlalo ezingemuva. Ngesinye isikhathi lesi sitshalo kuveza ukuguqulwa sasivumela ezidumile "Oka" imoto, izimfanelo leyehlukile kuphela injini 63 kancane namandla kakhulu amahhashi, kodwa ngokusobala kwakunemibono engafani eziningi. Lena imoto elinegama elithi "Dinara", nge owaqalwa ngaphambili bumper futhi Izinsimbi, ngakho umzimba has a ukubukeka yobuhle ngaphezulu. Kube ukuguqulwa ekukhiqizeni "Amandla", esebenze motor, it is eziqhutshwa buthule futhi akunabo ubuthi. Ngokuvamile, "Oka", izimfanelo okuyizinto akahle ukusebenza kanye ezingokoqobo, kakhulu kuyaqabukela idinga ukulungiswa, futhi uma kunesidingo, izindleko ukukhanda ezishibhile kakhulu. "Oka" - i izindlela ezinhle kakhulu zokuthutha azungeze umuzi.
Izinzuzo nezingozi nebubi ka imoto
Izinzuzo imodeli Vaz 1111 ungakwazi Akungabazeki kuchasiselwe ongaphakeme ngokungavamile petrol amalitha 3.2 kuphela 100 km kanye maneuverability kakhulu sezimoto ngayinye. Naphezu ubukhulu imoto yabo engadle ngabukhazikhazi, uma Songa izihlalo ezingemuva, egumbini imithwalo iba ngempela capacious, cishe iyafana kunoma iyiphi sedan ezivamile. Salon ifakwe isitofu ezinhle futhi ukushayela ukhululekile, isinyathelo bamba uthambile. Inzuzo ebaluleke kakhulu "Oka" Yiqiniso, ukwenza izinto zibe lula ukusetshenziswa, amanani aphansi izingxenye ezisele kanye nokugcinwa lula.
Ngamaphutha imoto - ukuntuleka ukwahlukanisa umsindo, okufutshane esihlalweni izihlalo kanye nokuntuleka iminyango misa, inombolo yesibili kuzokuhlupha kakhulu ukugibela ngosayizi compact ezinjalo.
Subcompact isabelomali imoto "Oka", izimfanelo okuyizinto ekahle imigwaqo yedolobha, handling ezahlukene ezinhle, maneuverability, ukusebenza kahle. Vaz 1111 iyona eshibhe futhi ezingabizi kakhulu imoto yasekhaya umkhakha auto ekilasini izimoto.
Isevisi ye-micro-loan "e-iklabishi". Izikweletu ezincane e-klabishi: izimo, ukubuyekezwa
Ukubuyekeza: "Helix Capital". Le nkampani "Helix Capital": imisebenzi esemqoka